केपी ओलीले पार्टी फुटाए सबैले थुक्छन्, इतिहासले धि’क्कार्छ – माधव नेपाल – yuwa Awaj
काठमाडौं : नेकपाभित्र जारी वि’वाद समाधानउन्मुख हुन छोडेर विभाजनको डिलतिर धकेलिएको छ। मुख्यतः प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत त्यागेर सरकारका लागि साझेदारी गर्न कांग्रेससँग प्रस्ताव गरेपछि विबवाद झन् गहिरिएको हो।
पार्टी फुटाएरै भए पनि सरकार जोगाउने कदमपछि नेकपाका अधिकांश नेताहरु ओलीसँग आ’क्रोशित बनेका छन्। नेकपा व’रिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टी फु’टाउन खोज्ने अपराधी भएको बताउँदै फुटाउन खोज्नेको पछि कोही नलाग्ने बताएका छन्। डिसी नेपालसँगको अन्त’र्वार्तामा नेता नेपालले प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको अहंकारका कारण पार्टी च’रम सं\_कटमा पुगेको आरोप लगाए।
प्रचण्डलाई फकाएर आफूलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि प्रचण्डलाई एक्ल्याउन फेरी आफूलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनले बताए। अहं’कार र भजनम’ण्डलीको स्तु’तीगान सुन्ने बानी परेको कारण केपी ओली बैठकबाट भाग्ने गरेको समेत उनको जिकिर छ।
नेता नेपालले ओलीमा चरम व्य’क्तिवाद भएका कारण समस्या निम्तिएको बताए। “उहाँमा व्य’क्तिवाद छ। उहाँमा अ’हंकार छ। मपाईँवाद छ। म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने उहाँको सोच छ। अरुसँग भएका योग्यता, क्षमता, खुवी, अनुभवलाई २ पैसाको पनि महत्व दिनुहुन्न। उहाँलाई छलफलमा विश्वास छैन।” नेता नेपालको भनाई छ, “उहाँलाई कमिटीको वैठकमा विश्वास छैन। उहाँलाई व्यापक वहसहरुमा रुचि छैन। वहस, वि’वाद, छलफलबाट एउटा निकासमा पुगिन्छ। ‘वादेवादे जायदे तत्वबोध’ भनिन्छ।”
ओलीले दा’सत्वलाई संरक्षण गरेको नेता नेपालको आ’रोप छ । ‘उहाँमा रहेको व्यक्ति पूजाको प्र’वृति रहेको छ। फोटोको संस्का’रलाई मान्यता दिनुहुन्छ।’ नेपाल भन्छन्, ‘फोटोको विज्ञापन, फोटाको प्रचार प्रसारहरु, त्यसले के हुन्छ भने मान्छेमा अहं’कार जन्म हुन्छ। आफ्नो अपरि’हार्यता जन्म हुन्छ। म नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने हुन्छ।’
उनले यसलाई बा संस्कृ’तिको नाम पनि दिएका छन् । अर्को भाषामा भन्दा ‘बा’ सं’स्कृति छ। उहाँ ‘बा’ भएको शब्दलाई रु’चाउनु हुन्छ। नेपालको आ’रोप छ, “उहाँको उमेरको भन्दा पनि बढी मान्छेले बा भनिदियो भने उहाँ दं’ग पर्नु हुन्छ। केपी ओलीले उपयोगितावा’दको रणनीति प्रयोग गरेको बताउँदै नेपालले एकविरु’द्ध अर्को खेलाएर आफ्नो स्वार्थ सि’बद्द गर्ने प्रवृत्तिको बिरोध गरेका छन्। “एकले अर्कोलाई खेलाई राख्ने, उपयोग गर्ने, उपयोगि’तावाद भयो।’
उनले अगाडि भनेका छन्ः पहिले उहाँको लडाई मसँग भयो। त्यसपछि प्रचण्ड जीसँग भयो। कहिले प्रचण्डजी लाई विश्वास जितर मलाई एक्लो बनाउने कोसिस भयो। अहिले मलाई फकाएर प्रचण्ड जिलाई एक्ल्याउने कोसिस जारी छ। प्रचण्ड र मलाई नसकिएपछि वामदेवलाई पनि फकाउन सकिन्छ कि भन्ने छ। एउटै चीज मलाइ, प्रचण्डलाई र वामदेवलाई दिने भन्नुहुँदो रहेछ। सबैलाई एउटै पदको लो’भ देखाउने हामी पदका लो’भि त हौइनौं।
पदको लडाई त होइन यो। यो त पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धको लडाई हो। यो कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको लडाई हो। भ्रष्टा’चारलाई निमि’ट्यान्न पारौं भन्ने हाम्रो भनाइ हो। भ्र’ष्टाचारको भागवण्डा पाएनौं भन्ने लडाई होइन। जनता रोग भोकले सडकमा छट’पटाइरहेका छन्। त्यसको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने कुराको लडाइ हो यो।
अध्यक्ष ओलीले बैठकका लागि आनाकानी गर्दा समस्या जन्मिएको नेपालको ठहर छ। सचिवालयको बैठक बोलाउन द’र्जनौपटक बिन्ती बिसाउँदा समेत त्यसको वास्ता नभएपछि लिखित निवेदन दिनुपरेको उनले अन्तर्वा’र्ताका क्रममा स्मरण गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले बारम्बार बैठक बसाल्न अनुरोध गर्दासमेत ओलीले नटेरेको उनले बताए। कोरोनाका कारण उत्पन्न समस्याका बारेमा समेत आफूले र नारायणकाजीले विशेष छलफल गरौं र बैठक गरौं भनेर प्रस्ताव राखेको उनले सुनाए।
प्रचण्डजीले अनेकौंपटक प्रयास गर्दाखेरी पनि हाम्रो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी बैठक बोलाउन तयार हुनु भएन।’ उनले भनेका छन्, “मैले पनि पटकपटक बैठकको नियमित आयोजना गरौं, हप्तामा एकपटक अनिवार्यरु पमा गरौ, सिस्टम नै बसालौं, नौजना त हो नि, एक घण्टामात्र बसेर छलफल गरे सकिँदैन ? औपचारिक नै गर्नु पर्ने भन्ने हुन्छ ? भने। तर अध्यक्ष ओलीले भने बैठकबाट भाग्न खोजेको उनको भनाइ छ। ओलीलाई बैठकबाट ए’लर्जी भएको उनको तर्क थियो।
ओलीले मौ’खिक रुपमा जतिपटक अ’नुरोध गर्दा पनि बैठक बस्न नमानेपछि लिखित पत्र लगेर गएको उनले बताए। तर लिखित पत्र लेख्दा समेत ओलीले उल्टै अहंकार देखाएको नेपालको भनाइ छ। ‘प्रतिवेदनभन्दा पहिला दुई पानाको बैठकको निम्ति आग्रह पत्र लिएर गएका थियौं। निवेदन दर्ता गर्न गर्यौं। आग्रह गर्न गर्यौं।’ उनले अगाडि थपे, ‘कस्तो विडम्बना ?एउटा पार्टीभित्र, पार्टीको सचिवालयको बैठक प्रत्येक हप्ता बस्नुपर्नेमा, त्यो सचिवालयको बैठक बोलाउनका लागि ५ जना बरिष्ठ व्यक्तित्वहरु, दशकौंसम्म पार्टी हाँकेका नेताहरु, ३ जना मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरु थियौं त्यहाँ। उपप्रधानमन्त्रीहरु छन् त्यहाँ। सब लाइन लागेर गएका छन् त्यहाँ। जस्तो महाराजाको दर’वारमा गएजस्तो। हजुर बैठक बोलाइदिनु पर्यो भनेजस्तो। उहाँले, हुँ‘ तोक लगाइदिन्छु। जवाफ पाइयो। मैले भने, तपाईँको यो अहं’कार तोक लगाउने ? मिति तोकौं।
प्रकृयाबाट हुन्छ भन्नुभयो। मैले फेरि पनि भनें तपाईँमा यत्रो अ’हंकार जागेको ? हामीले कल गरेको आधारमा बोलाउनु पर्नेमा प्रचण्ड थाकिसक्नु भयो। मैले महासचिव विष्णु पौडेललाई पनि कति’चोटि भनेको छु। यो पार्टी एकताको कामको कागजपत्र तयार गरेर एक कपी मलाई दिनुस् भनेर।
पार्टी एकताको काम १ महिनामा सकिन्थ्यो १ महिनामा। पारदर्शी तरिकाले गर्ने हो भने, मापद’ण्डका आधारमा गर्ने हो भने, आजसम्म एउटामात्र रे’कर्ड हो र यो। मेरो भनाइ के हो भने कुनै पनि चीजको विधि बनाउँदाखेरी, वि’धान बनाउँदाखेरी, मापद’ण्ड तयार गर्दाखेरी, बहसहरु गरौं। त्यो भयो भने काम गर्ने बाटोमा वि’वाद हुँदैन।
पार्टीको बैठकमा २ वटा ज्यूदै नेताको फोटो टाँसियो। सबैले देख्नुभयो। त्यसको पहिलो वि’रोध गर्ने मान्छे मै हो। हाम्रो कम्यु’निष्ट पार्टीमा जिम्मे’वारीका हिसाबले कोही ठूलो सानो भएपनि सबै समान हुने नेपालले बताए। तर अध्यक्ष ओलीले भने सामन्ती रवाफ देखाएको नेपालको आ’रोप छ।
नेता नेपालले केपी ओलीले आफ्ना गलत कुरा स्वीकार्नुभन्दा उल्टै धम्की दिने गरेको बताए। विधि र पद्धतीको कुरा उठाउँदा म कडा कदम चाल्छु भनेर धम्क्याउने गरेको उनको अनुभव छ। यो क’डा कदमलाई उनले यसरी ब्याख्या गरेका छन्ः
राजा आऊ देश बचाउन भन्ने नारा लागिरहेको बेलामा संविधानमा भएको संघीय लोक’तान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने शब्द हटाउनु गल्ती भयो । म पनि नेपालको नाम नेपाल मात्र लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ। मैले सुरुदेखि नै नेपालमात्र राखौं नामको अगाडि धेरै कुरा नजोडौं पनि भनेँ।
तर, राखियो। राखिसकेको छ भने यो कुन बेलामा गर्ने त्यो बहसको विषय हैन ? यसले भोलि विवा’द ल्यायो भने पार्टीले डिफेन्स गर्नु पर्दैन ? त्यो कुरा पार्टीलाई थाहा छैन। हामीले पत्रिका पढेर थाहा पाउँछौं हामीले पत्रिकाबाट थाहा पाएपछि हामीले किन जिम्मा लिन्छौं। हामीले निर्णय प्र’कृयामा सहभागी भएपछि बल्ल जिम्मा लिन्छौं। मैले धेरैपटक भन्दै आएको छु।
उहाँको परराष्ट्रमन्त्रीले एक हप्ता पहिलादेखि नै थाहा थियो भन्ने, उहाँले थाहा पाएन भन्ने ? मोदी’जी ले पनि राजनीतिक व्यक्तित्व नपठाएर कहीँ अरु पठाउँछन् ? त्यो पनि इन्टेलि’जेन्सको मान्छे कसैले पठाउँछ ?
भित्र भएको कुरामा पनि मैले सबै पारदर्शी गरेको छु भनेर उ’हांले मलाई भन्नुभएको छ। सबै लिखत छ। मैले भने किन लुकाको ? पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख म हुँ। मसँग छलफल गर्नु भो ? म किन डिफेन्स गर्छु ? मलाई अन्ध’कारमा राखिन्छ भने मैले डिफेन्स गर्नु पर्ने कारण के छ ? मैले डिफेन्स गर्न सक्छु।
नेकपा पार्टी नफुट्नेमा नेपाल ढुक्क देखिए। “किन फुट्छ पार्टी ? म पार्टीभित्रको बरिष्ठ नेताको पहिलो पदबाट हटेर अपमा’नको घुट पिएर चौथो नम्बरमा झर्दाखेरी पार्टी फुटाएँ ? अपमानको घुट मैले पिएको हैन” उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन्।
यद्यपि नेकपा एमाले नाम दल दर्ता भएपछि कतिपयले शंका गरेको उनले बताए। “मान्छेमा शं’का छ। घ’टनाक्रमले त्यो बताइरहेको छ। तर, उहाँले पार्टी फुटाउने काम गर्नुभयो भने त्यो भन्दा मुर्खता अरु केही पनि हुँदैन। उहाँको पछि कोही पनि इमान्दा’र मान्छे लाग्दैन।”
यदि केपी ओलीले पार्टी विभाजन गरे भने उनको पछि निकट समर्थकबाहेक अरु नजाने नेपालको ठहर छ। “उहाँको पछि निष्ठावान कोही पनि लाग्दैनन्, उहाँका भक्तहरु, भजनमण्डलीका केही मान्छेहरु लाग्लान्।” उनले भने, “कम्यु’निष्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ। व्यक्ति प्रधान हुँदैन। पुष्पलालले प्रष्ट भन्नु भएको छ। कम्युनिष्ट पार्टीमा नीति प्रदान हुन्छ, नेता प्रदान हुँदैन। यो प्रकृयाले जाने हो भने व्यक्ति अपरिहार्य छैन। व्यक्तिहरु आउँछन् जान्छन्।”
बाहिर प्र’चार पनि के छ भने, उहाँ त नवौं महाधिवेसनबाट अध्यक्ष चुनिएर आएकोले उहाँले अध्यक्ष छोड्नै मिल्दैन। त्यो होइन, त्यो अध्यक्ष आएको हो भने उपाध्यक्ष खोइ पदमा बस्या, उपमहासचिव खै ? सचिवहरु खै पदमा बस्या ?
त्यागको कुरा हामीले गरेका छौं, त्यो पदको त्याग हो कि, विचारको त्याग हो कि ? आफूलाई केन्द्रमा नराखौं। पार्टीभित्रको कचकचले मैले छोडेको हैन त रु मैले त छोडेँ त। मलाई २२ वटा पार्टीको समर्थन हुँदा पनि मैले पार्टीभन्दा ठूलो प्रधानमन्त्री पद हैन भनेर छोडेँ। मैले चु’नौति दिएको भए ?
अन्तमा नेपाल भन्छन्ः म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने, यो साना दुःखले आज्र्या’को पार्टी हैन, साना दुःखले आज्र्याको गणतन्त्र वा लो’कतन्त्र होइन। यसमा हाम्रा पुर्खाहरुले पहिलो पुस्ताका नेताहरुले निकै ठूलो रगत पसिना बगाएका छन्। मेहेनत गरेका छन्। त्यो सबैबाट हामीले एउटा ठूलो उपलब्धी प्राप्त गरेका छौं। संविधान बनाएका छौं।
नेपाललाई विकासको नयाँ चरणमा पु(याएका छौं। आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृ’तिक रुपान्तरणको महान अभियान पूरा गर्न बाँकी नै छ। पार्टी फुट्दैन, फुट्न दिन हुँदैन। जसले फुट्ने कुरा सोच्छ, फुट्ने काम गर्छ त्यो अपराधि हुन्छ त्यस्ताका पछि कोही पनि जाँदैन।
Prevबादलसहित ६ भाईले आफ्ना सांसदको हिसाब सके ,एक दलसँग सहकार्य गरेर सरकारमा बनाउने…हेर्नुहोस् ।
Next३ हजार बाईकसहित २० हजारको सहभागितामा भोलि पोखरामा राजावादीहरुले र्याली निकाल्ने…हेर्नुहोस् ।